Iràna · Aogositra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Iràna · Aogositra, 2012
Tantara mikasika ny Iràna tamin'ny Aogositra, 2012
Israely17 Aogositra 2012
Avy amin'ny lohateny lehiben'ireo fampahalalam-baovao mahazatra dia tahaka ny eo an-tokonan'ny ady i Iran sy Israely. Mitohy mandrahona hanafika ireo foto-drafitrasa nokleary iraniana ireo mpanao politika Israeliana, ary ireo manampahefana Iraniana kosa mitanisa ireo teny fanentanany hatrizay milaza ny "hanjavonan'i Israely eo amin'ny sarintany". Nefa arakaraky ny fitomboan'ireo sahoan-dresaka hisian'ny...
Iran: Raha Mamono Ny Horohorontany, “Mivavaka Ny Fahitalavitra”
Fanoherana12 Aogositra 2012
.Horohorontany roa mahery vaika no namely ny faritra avaratra andrefan'i Iran, ny faritany Azarbaijan atsinanana tamin'ny Sabotsy (11 Aogositra 2012), nahafaty olona 250 ary naharatràna manodidina ny 1.800. Nibosesika tao amin'ny aterineto ireo Iraniana mba hisaona ireo nafoy sy hiantso fanomezan-drà ary fanampiana. Naneho ny hatezerany ihany koa ry zareo...
Fahalalahàna miteny10 Aogositra 2012
Iran: Mankalaza Ny Medaly “Manan-tantara” Sady Manakiana Ny Mpitsara
Fanatanjahantena08 Aogositra 2012
Mankalaza ny andro iray toa zato ho azy ireo teo amin'ny tantaran'ny Lalao Olaimpika ry zareo Iraniana satria nahazo medaly volamena roa ny atleta Iraniana ary medaly volafotsy roa tamin'ny Talata